Al-Shabaab Oo Todobaadkii tagay fuliyay Silsilado Weeraro ah. (Akhriso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Shabaab Oo Todobaadkii tagay fuliyay Silsilado Weeraro ah. (Akhriso)
On Jul 12, 2020 1,375 0
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fuliyay howlgallo kala duwan, kuwaas oo ka kala dhacay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana beegsaday Shisheeyaha, Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Todobaadkan waxaa sidoo kale Tabellaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdihso lagu toogtay sarkaal sare oo katirsan ciidamada milliteriga Dowladda federaalka, waxaana dilka geystay rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Jimcihii aynu soo dhaafney, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka hortagay weerar ciidama Bankraf ah ay kusoo qaadeen deegaanka Mubaarak, waxaana halkaas looga dilay 3 askari, halka ay dhaawacmeen afar kale, iyadoo ay Mujaahidiintu gubeen gaari ay wateen ciidamadaas.
waxaa sidoo kale maalintii xigtay kamiin ka dhacay duleedka degmada Balcad, oo lala eegtay ciidamo katirsan kuwa dowladda federaalka oo sahay u siday kuwa Burundi ku dhintay saddex askari, halka lagu gubay gaari booyad ah, waxaana ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen saanad milliteri.
Maalintii xigtay ee Axadda, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka Koonfur galbeed ee deegaanka Awdiinle, halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah.
Haddii aan u nimaadno wilaayada jubbooyinka, waxay todobaadkii hore marti gelisay weeraro dhowr ah oo ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen Kenyaatiga iyo kuwa maamulka Jubbaland.
Arbacadii, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerareen saldhigyada ciidamada Kenya ee deegaanka Hozingow oo dhaca xuduud beenaatka Kenya iyo Soomaaliya.
Ciidamo Kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay Mujaahidiintu ku qaadeen saldhiga ciidamada Kenya ee deegaanka Kulbiyow.
Waxay kaloo Khamiistii lasoo dhaafay Mujaahidiintu weerareen saldhigyada Kenyaatiga ee deegaannada Hozingow iyo Kudhaa, halkaas ay ka dhasheen khasaare kala duwan.
Gobolka Bari ee uu ka arimiyo maamulka Puntland ayaa sidoo kale kamid ah meelaha ay ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen howlgallada todobaadkii lasoo dhaafay.
Mujaahidiinta ayaa duqeyn iyo weerar isugu daray ciidamo katirsan maamulka Puntland oo saldhig ku leh deegaanka Galgala ee buuraleyda Goolis.
Khamiistii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab weerar culus ku qaadeen saldhig ballaaran oo deegaanka Karkara oo katirsan Gaarisa ku leeyihiin ciidamada Kenya.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka dagaalanta Soomaaliya iyo Kenya, waxaana hadafkeedu yahay in dalka Soomaaliya laga xureeyo Shisheeyaha, maamul islaami ahna la taago, sidaba ay marar badan sheegeen hogaamiyaasheeda oo Saxaafadda la hadlay.